Urxvt (rxvt-unicode) ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း၊ Linux မှ
Urxvt (rxvt-unicode) ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
DMoZ | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
rxvt-unicode ဖြစ်သည် သို့မဟုတ်ပဲ urxvtဤသည်မှာဤခမ်းနားသော terminal emulator ကိုလူသိများသည်။
ကျွန်ုပ် system ကိုစိတ်ကြိုက်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး console ကိုပုံမှန်အသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောအရာများကိုကြိုးစားပြီးနောက်ဤတစ်ခုနှင့်အတူငါနေခဲ့သည်။
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်သောဖြန့်ဝေမှုများမတူပါက၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြမည်မဟုတ်ပါ၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင်၏ repositories ကိုစစ်ဆေးပါ (ဖြစ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်) သို့မဟုတ်သင်လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ စီမံကိန်းစာမျက်နှာ.
rxvt-unicode ၏တိုးမြှင့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် rxvt (အခြား terminal emulator) ၏အမည်မှာအထောက်အပံ့ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည် ကုဒ်၎င်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများအနက်တစ်ခုမှာ tab များအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်အသုံး ၀ င်သောအရာများ၊ ၎င်းသည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီး perl interpreter တစ်ခုပါရှိသည်။
urxvt ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့အားသင့်စရာတစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါကသူ့မှာရှိတဲ့ interface ကအရမ်းကိုလျစ်လျူရှုခံထားရတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရမယ် ~ / .Xdafaults o ~ / .Xresourcesမည်သည့်အရာသည်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သနည်း။ မှတ်သားသင့်သည်မှာလူတိုင်းသည်သူတို့နှစ်သက်သောစာသားတည်းဖြတ်သူကိုသုံးရမည်၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သုံးမည် vim.
# - urxvt တွင်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်မည့်အရောင်များကိုသင်သတ်မှတ်သည်။ သင်နှစ်သက်သောပေါင်းစပ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်
# - Window အသွင်အပြင်
# | - ပြတင်းပေါက်၏ခေါင်းစဉ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့် urxvt ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည်
# | - စိတ်ကြိုက်အိုင်ကွန်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်ပြီးလိပ်စာတွင်ထည့်ရမည်
# | - ကျွန်ုပ်တို့သည် scroll bar များကိုဖယ်ရှားသည် (ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မကြိုက်ပါ)
# | - ငါတို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုထည့်ပါ
# | - အဓိကအရောင် (စာလုံးများ) ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည်။
# | - ကျနော်တို့ cursor အရောင်သတ်မှတ်ပါတယ်
# | - Cursor သို့အလင်းအမှောင်ထည့်သည်
# | - ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုမည့်ဖောင့်အမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်သည် (သင်၏ system တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဖောင့်အပြည့်အစုံကိုရရန်သင့်ကွန်ကူတွင် "fc-list" ကိုအသုံးပြုသည်) ။
# | - အကယ်၍ စာလုံးများအကြားကွဲလွဲမှုရှိပါက၊ -1 သည်လျော့ချရန်ပစ်ဇယ်အရေအတွက်ဖြစ်သည်
# | - tabs များအတွက်အထောက်အပံ့ထပ်ဆောင်းသည်
URxvt.perl-ext-commoni: ပုံမှန်၊ tabbed
# | - tabs တွေရဲ့နောက်ခံအရောင်ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်
# | - ကျနော်တို့မျက်တောင်များ၏တိုကျရိုကျအရောင်သတ်မှတ်ပါတယ်
# | - tab separators များ၏နောက်ခံအရောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည်
# | - tab tab ၏ရှေ့အရောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည်
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် [b] xrdb [/ b] လုပ်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်ဖွင့်သည်
ငါတို့သည်ဤကဲ့သို့သော terminal ကိုရပါလိမ့်မယ်:
ကျွန်ုပ်တို့မှသင့်လျော်သောထင်မြင်ချက်အရပေါင်းစပ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန် hexadecimal အရောင်များကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်အထောက်အကူပြုသောစာမျက်နှာများစွာရှိသည်။ ဒီစာမျက်နှာ.
tab အသစ်များဖန်တီးရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာ option ပေါ်တွင် mouse ကိုနှိပ်ခြင်းဖြစ်သည် [အသစ်] ကျွန်ုပ်တို့၏ console ၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်နှင့်အခြားမှာ SHIFT keybin + Down arrow key ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ tab ကိုပိတ်ပါ
CTRL + D ကိုသော့ချက်ပေါင်းစပ်
SHIFT + လက်ဝဲ cursor သော့ (သို့) SHIFT + Right cursor သော့။
urxvt မှကမ်းလှမ်းသောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ထံသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကိုသုံးနိုင်သည် လူစာမျက်နှာများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ console ကနေ။
သင်လည်းလည်ပတ်ရန်စိတ် ၀ င်စားလိမ့်မည်
Arch wiki ပေါ်တွင် Urxvt
Crunchbang ဝီကီရှိ Urxvt
Fedora blog မှာ Urxvt
Debian ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင် urxvt
Ciberterminal ဘလော့တွင် Urxvt
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Urxvt (rxvt-unicode) ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
ဟယ်လီနာ ရယ် ဟုသူကပြောသည်
ရိုးရိုးလေးသာယာလှပတဲ့၊ ခင်ဗျားကဒီ console ကိုအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအဆင့်ကတကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာကောင်းပါတယ်။ ငါလက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်း၏ man စာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သောပမာဏသည်ပြည့်စုံနေသည် =) ...
ငါ DmoZ ကိုပဲ install လုပ်လိုက်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ကန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြုပြင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းကိုဖွင့်သောအခါ "uc "ကိုထည့်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ cursor က" block "ကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်။ ဒါဟာ C64 ငါ့ကိုသတိပေးနေပါတယ် လေးစားပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ distro (archlinux) တွင်၎င်းကိုဖွင့်ရန် binaries နှစ်ခုရှိသည်။ urxvt မှာ tabs များမရှိသော်လည်း urxvt-tabbed မရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနောက်ခံမရှိပါ။ ထို့အပြင် SHIFT + Cursor သော့များသည်ကျွန်ုပ်အတွက် tabs များဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးကို အသုံးပြု၍ သူတို့မှတစ်ဆင့်ရွှေ့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ငါ XFCE terminal နှင့်ကပ်နေသည်မှာယခုအချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ 🙂
မှတ်စုရဲ့အဆုံးမှာ Arch wiki အပါအ ၀ င် link အချို့ထပ်ထည့်ပါ။ သူတို့ကိုသွားနိုင်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရရှိရန်အခြားနည်းလမ်းများကို urxvt အတွက်သတ်မှတ်သည်။ xcompmgr နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရရှိရန်အမြဲတမ်းနည်းလမ်းရှိသည်
Damian rivera ဟုသူကပြောသည်
Damian Rivera အားစာပြန်ပါ
Agustingauna ၅၂၉ ဟုသူကပြောသည်
မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!။ ဤနေရာတွင်သင်နောက်ထပ်ဆက်တင်များကိုရှာနိုင်သည်။ http://dotshare.it/
console အရောင်များ၊ vim, ncmpcpp, emacs, conky စသည်တို့အတွက် settings ရှိပါတယ်။ tilings အတွက် settings လည်းရှိပါတယ်
Gregory Swords ဟုသူကပြောသည်
~ / .Xresources မှာပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုပြန်ဖွင့်ရန်ဘယ်သူမှမပြောသေးဘူးထင်တယ်
Gregorio Espadas ကိုပြန်ပြောပါ
Gespadas သူငယ်ချင်းတယောက်။ အဲဒါကိုမေ့ပစ်လိုက်မယ်၊ မေ့ပစ်လိုက်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။ S ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ...
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ system တွင်ဤ console ကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ urxvtd နှင့် urxvtc တို့ကြောင့်၎င်းသည် daemon / client အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
စကားမစပ်၊ အသုံး ၀ င်တဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ urls ကိုဘရောင်ဇာကို mouse (သို့) ကီးဘုတ်မှတဆင့်ဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်
အရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါစမ်းကြည့်တယ်၊ ပြောင်းလဲသွားတယ်၊ နောက်ပုံစံတစ်ခု၊ နောက်ကြည့်၊
ကျွန်ုပ်သည် Eterm အသုံးပြုသူဖြစ်သော်လည်းအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ လေးစားပါတယ်
ငါ Eterm + urxvt ၏မျက်နှာပြင်တစ်ခုချန်ထားခဲ့သည်။
Windows 8 vs. GNU / Linux: လှည့်စားတာလား၊
Sabayon Linux 10 ကို install လုပ်နည်း